राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सांसदहरुकै मतभेद « Janata Samachar
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सांसदहरुकै मतभेद
प्रकाशित मिति :4January, 2019 7:33 pm
काठमाडौं । सरकार र डा. गोबिन्द केसीबीच भएको सम्झौताअनुरुप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विद्येयक ड्राफ्ट बनाउने बिषयमा सांसदरुहबीच नै मत बाझिएपछि संसदमा दर्ता गर्ने म्याद लम्बिएको छ । सम्झौतामा भएका अधिकांस बुँदामा सहमति भए पनि केही प्रमुख विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयकका केही बुँदामा सहमति जुट्न नसक्दा बिहीबारको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति बैठक स्थगित भएको हो । अनौपचारिक छलफलक्रममा समेत प्रमाणपत्र तहसम्मका प्राविधिक शिक्षालयलाइ फेज आउट गर्ने, छात्रवृत्तिमा स्नातक गर्नेले दुर्गममा २ या ३ वर्ष काम गर्नुपर्ने भन्ने प्रमुख विषयमा सांसदहरुबीच मत बाझिएपछि बैठक पुस २३ गतेका लागि सारिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बताउनु भयो ।
सरकार र केसीबीच भएको सम्झौता अनुरुप नै अघि बढ्न अधिकांश सांसद सहमत भए पनि केहीको विमति छ । उपत्यका बाहिरमात्रै मेडिकल कलेज खोल्न दिइने बिषयमा डा. केसीसँग सम्झौता भए पनि कसले सम्बन्धन दिने भन्ने विषयमा अन्योल छ । यही विषयमा संविधानअनुरुप लचिलो भएर जाने या सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाने भन्नेबारे समितिले निर्णय लिन सकेको छैन । छलफलबाट सहमति नजुटे मतदान प्रक्रियामा समेत जान सकिने संसदीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताउनु भयो ।